Odowaa oo ku dhawaaqay in ciidamada nabad sugida qaranka ay ka baxeen Caasimadda Muqdisho - Axadle – Axadle
Muqdisho (Axadle) – C / raxmaan Odawaa oo ah xoghayaha Madasha Xisbiyada Qaranka sidoo kalena ah mudane ka tirsan baarlamaanka ayaa wareysi uu siiyay Dalsan TV kaga hadlay arimo badan oo xasaasi ah.
Mudane Odowaa ayaa ku eedeeyay Madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed C / llahi Farmaajo inuu mas’uul ka yahay xaalada dalka uu hada ku sugan yahay iyo dhibaatada, isagoo sheegay inuu isagu masuul ka yahay dadkii dhawaan ku barakacay Caasimadda Muqdisho.
Wuxuu shaaca ka qaaday in xoogaga mucaaradka aysan ka bixi doonin Caasimadda Muqdisho ilaa iyo inta laga dhameystirayo wadahadaladii ugu horeeyay ee saraakiisha iyo ciidamada dhexmara, kaasoo waqti qaadan doona ayuu yiri.
“Masuuliyada tahriibku waxay saaran tahay Farmaajo (masuuliyada ceyrinta). Wadaxaajoodyada ayaa socda oo lala yeelanayo militariga, sidaas darteed waqti ayey qaadan doontaa in tan la gaaro. “Waxaa jira taliyayaal ciidan oo shalay cudud isku biiriyay,” ayuu yiri.
Intii uu wareysiga kujiray, wasiirkii hore ee arimaha gudaha wuxuu kajawaabay su’aal ahayd bal inuu bulsho ahaan u difaacay General Saadaq John iyo inuu aad ucaawiyay Farmaajo markuu kasoo horjeeday
“Haa, waa wax laga xishoodo Xildhibaankiisa. Bulsho kuma dhex jiro, waxaan fadhiyaa 4.5,” ayuu yiri xildhibaan ka jawaabayay su’aal ahayd in Saadiq John uu difaacay koox qabiil. Markii ay guursadeen Farmaajo.
Odowaa ayaa ugu danbeyntii sheegay in beeshu ay soo nooleysay madaxweynihii waqtigiisu dhamaaday wuxuuna xusay inuu burburiyey wada hadalo lagu hoobtay oo ka socday magaaladiisa Gedo.
Abdiwahab Ahmed 1046 posts